Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0513 zom
Zoma 3 May
“Tsy miankina amin’ny habetsahan’ny fahazavana noraisintsika ny fijoroantsika eo anatrehan’Andriamanitra, fa amin’ny fampiasantsika izany fahazavana izany. Noho izany, na dia ny jentilisa aza, izay nifidy ny tsara araka izay farany ahazoany mahafantatra azy, dia eo amin’ny toerana tsaratsara kokoa noho ireo izay efa nanana fahazavana lehibe, ka milaza ny tenany ho manompo an’Andriamanitra, nefa tsy miraharaha ny fahazavana ary mifanohitra amin’izay lazainy ny fiainany andavanandro.” — IFM, tt. 240.
Ivereno ny valin-teny nomenareo ny fanontaniana ao amin’ny fizaran-desona tamin’ny Alahady momba ny fianarana mankahala ny ratsy sy mitia ny tsara, ary koa mikasika ny loza ateraky ny fiantsoana ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy. Nahoana no mahazo vahana amin’ny fomba manokana io loza io rehefa manomboka manova ny soatoavina eo aminy ny kolon-tsaina sy ny fiaraha-monina, amin’ny fomba izay manaiky fihetsika, fomba fiaina ary toe-tsaina sasantsasany, izay hita mazava fa melohin’ny Baiboly? Isika tsirairay isam-batan’olona, ary na dia isika fiangonana iray manontolo aza, dia tsy voaaro amin’ny fironana ara-kolon-tsaina sy ara-piaraha-monina misy antsika, sa tsy izany? Saintsaino maharitra ireo fiovana niseho teo amin’ny kolon-saina sy ny fiaraha-monina misy anao manokana nandritra ny taona maromaro. Ohatra, inona ireo zavatra izay noheverina fa mahamenatra sy fady teo aloha kanefa aseho sy atao an-karihary ankehitriny, heverina mihitsy aza fa tsara na, fara-faharatsiny tsy diso? Ahoana ny fiantraikan’ireny fiovana ireny teo amin’ny fihetsiky ny fiangonana manoloana ireny asa sy fanao ireny? Inona no azontsika atao mba hiarovantsika tena sy hiarovantsika ny fiangonantsika tsy ho tafalatsaka amin’ny fandrika mampidi-doza amin’ny fiantsoana ny ratsy ho tsara? Miaraka amin’izany koa, inona ireo fiovana ara-kolon-tsaina ho amin’ny tsara nisy fiantraikany teo amin’ny fiangonana tamin’ny fomba tsara, fomba izay mitaratra akaiky kokoa ireo fitsipiky ny fitiavana sy fanekena ny hafa nasehon’ny fiainan’i Jesôsy?
Saintsaino maharitra ilay hevitra momba ny “mosary” – (hanoanana) fitadiavana ny Tenin’Andriamanitra fa tsy hahita. Inona no mety ho fomba hisehoan’izany? Moa ve Andriamanitra hanafina an-kitsirano ny fahamarinana tsy ho hitan’ny olona, sa ny fihetsiky ny olona no mahatonga azy ireo tsy afaka handray tanteraka ny Tenin’Andriamanitra? Sa mety ho izy roa ireo miaraka? Sa zavatra hafa tanteraka mihitsy? Mifanakaloza hevitra.
Amin’ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika, izay miaina amin’ny fahazavana betsaka ary manana antony maro hinoana ireo fahamarinana nomena antsika, moa tsy tandindomin-doza ve isika hihevitra fa ny fahalalantsika ireo fahamarinana mahatalanjona ireo no hany zavatra ilaintsika? Moa ve tsy tokony hisy akony eo amin’ny fomba fiainantsika sy ny fifandraisantsika amin’ny hafa, tsy ao am-piangonana ihany fa eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika koa, ireo fahamarinana nitahiana antsika ireo? Amin’ny fomba ahoana? Raha lazaina amin’ny teny hafa, ahoana no ahafahantsika miaina araka ny fahamarinana nankinina tamintsika? Nahoana no tena zava-dehibe tokoa ny fanaovantsika izany?